नान्चन्ग Zongheng मशीनरी प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड. Error 400 (Bad Request)!!1
नयाँ पटक फिर्ता वर्ष पछि काम गर्न, हामी नान्चन्ग Zongheng कारखाना धेरै व्यस्त छ, हामी हाम्रो विदेशी ग्राहक एक अनुकूलित मिसिन उद्धार गर्न केहिले छ। क्रममा हाम्रो ग्राहक पहिले मिसिन प्राप्त गर्न र पहिले उत्पादन सुरु गर्न अनुमति, हामी सबै सहकर्मी गरे हाम्रो मिसिन जहाज सर्वश्रेष्ठ. त्यो भन्दा पहिले , हामी परीक्षण र वितरण अघि ठीक छ सबै जाँच , हामी हाम्रो ग्राहक गर्न जिम्मेवार हुन आवश्यक रूपमा.
हामी पनि छ एक उच्च गुणस्तरीय कर्मचारी टोली, भन्दा बढी को विद्यमान कर्मचारी 500 मान्छे, लगायत 52 ईन्जिनियरिङ् र प्रौद्योगिकी कर्मियों, 20 ईन्जिनियरहरु र थप, 52 टेक्नीसियन. तिनीहरूले मशीनरी अनुभव भन्दा बढी छ 30 वर्ष, तिनीहरूलाई केही विभिन्न ग्राहकहरु 'अनुसार मिसिन अनुकूलित बनाउन धेरै अनुभव छन् आवश्यकता.
आफ्ना आफ्ना प्रशोधन अनुरोध लागि सबैभन्दा उपयुक्त मिसिन खरिद गर्न हरेक ग्राहक सक्षम, हामी एक उत्पादन आर स्थापित गरेको छ&डी विभाग ग्राहकहरु यसको आवश्यकता जो लागि गैर-मानक उत्पादनहरु को लागि अनुकूलित प्रक्रिया प्रदान गर्न. त्यसैले यो सिद्ध अनुकूलित मशीनिंग केन्द्र बाहिर आउँछ. मलाई आशा छ यो उल्लेखनीय उत्पादन हाम्रो ग्राहकहरु थप मूल्य सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ.
हामी नान्चन्ग Zongheng मशीनरी कारखाना मशीनिंग केन्द्र को एक पेशेवर निर्माता हो. यो राष्ट्रिय मानक वा एक गैर मानक छ कि छैन भनेर अनुरोध, तपाईं विशेष आवश्यकताहरु छन् भने हामी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो के हुनेछ.
अघिल्लो:पाकिस्तान ग्राहक Visiting हाम्रो
अर्को:नाइजेरिया बजारमा प्रवेश